La kulan Fellows
Bayaanka Qiimaha Bulshada
Farshaxanada shaqeeya waxay dhaqaajinayaan bulshooyinkeena waxayna sii xoojiyaan cabbirka iyo tayada nolosheena.
Taageerada fanaaniinta shaqsiyeed waxay diiradda saaraysay barnaamijka Fanka & Dhaqanka ee McKnight Foundation tan iyo markii la aasaasay. Xirfadlayaasha Farshaxanka ee McKnight waxay kordhiyaan fursadda sahaminta, xasilloonida dhaqaale, iyo awoodda wax-soo-saarka farshaxan-yaasha iyagoo siinaya $25,000 taageero aan xadidnayn oo loogu talagalay fannaaniinta daryeelka dhexe iyo fursadaha farshaxanka iyo horumarinta xirfadeed ee gaarka ah.
La xiriir mid ka mid ah wada-hawlgalayaasha barnaamijyada is weheliya ee hoos ku xusan xilliyada kama dambaysta ah ee anshaxa, tilmaamaha, iyo macluumaad dheeraad ah.
Wadashaqeyn: Laba $ 25,000 Awards.
Degenaanshaha: $ 5,000 oo loogu talagalay degenaanshaha 3-bilood ee Minnesota, iyada oo lagu darayo $ 300 oo ah aqoon isweydaarsi guud.
Wadashaqeyn: Saddex Billadood ah oo ah $ 25,000.
Wadashaqeyn: Abaalmarinada $ 25,000, oo lagu daray hal bil oo ah goobta deganaanshaha farshaxanka.
Degenaanshaha: $ 15,000 oo loogu talagalay degenaansho laba bilood ah oo kuyaal Minnesota.
Farshaxannada Ku-hawl-galka Bulshada
Wadashaqeyn: Laba $ 25,000 abaalmarin.
Dadka Dhaqanka leh
Wadashaqeyn: Saddex abaalmarin $25,000 oo la siinayo dadka dhaqan -dhaqameedka ah ee ku dhaqma hab -nololeedka muqaddaska ah oo bogsanaya oo la wadaaga dhaqamada farshaxanka dhaqanka ee jiilasha.
Wadashaqeyn: Abaalmarin $ 25,000 ah.
Wadashaqeyn: Abaalmarin $ 25,000, oo lagu daray $ 2500 oo doolar ah oo loogu talagalay mashruuc bulsho. Shan buundo oo dheeraad ah ayaa heli doona $ 1,000 si loo sameeyo sawir.
Xarunta Playwrights '
Deganaanshaha Qaranka iyo Guddiga: $ 12,500 oo ah abaal-marinta deganaanshaha Minnesota.
Wadashaqeyn: Saddex $ 25,000 oo abaalmarin ah oo loogu talagalay aktifayaasha, agaasimayaasha, naqshadayaasha masraxa, iyo kuwa kale ee shaqadooda ugu weyn ee shaqada ay ugu horreyn tahay wax soo saarka masraxiyada.
Wadashaqeyn: Abaalmarin $ 25,000.
Wadashaqeyn: Abaalmarin $ 25,000 ah oo loogu talagalay qorayaasha gabayada ama qandaraaska sanadaha kale. Mid ka mid ah abaalmarinta $ 25,000 ee qoraaga suugaanta carruurta.
Wada -hawlgalayaal Dheeraad ah
Barnaamijka Farshaxanka Farshaxanka ee McKnight wuxuu la shaqeeyaa laba lamaane oo dheeri ah si loo taageero fanaaniinta iyo dhaqan -yaqaannada inta ay la kulmayaan waaya -aragnimadooda.
Isbahaysiga Bulshada Farshaxanka
Isbahaysiga Bulshooyinka Farshaxanka ah ayaa maamula Dalladda Degenaanshaha Farshaxanka ee McKnight oo dejisa deganaanshaha saaxiibbada McKnight iyo taageeridda bulshada goobaha deggan ee ka qaybgalaya.
Springboard for the Arts waxay siisaa fadhiyo macluumaad iyo taageero fanaaniinta iyo dhaqan -dhaqameedka codsada wehelnimada McKnight; waxay bixisaa horumarin xirfadeed iyo fursado wadatashi oo loo habeeyay saaxiibbada McKnight; waxayna taageertaa bulshada wada -hawlgalayaasha wehelnimada.